जनताको साथले अपराधीहरुसंग लड्न प्रेरणा मिलेको छ -सर्बेन्द्र खनाल -
जनताको साथले अपराधीहरुसंग लड्न प्रेरणा मिलेको छ -सर्बेन्द्र खनाल
जनताको साथले अपराधीहरुसंग लड्न प्रेरणा मिलेको छ
म निसंकोच र निर्भयतापूर्वक नराम्रा प्रबृत्तिहरुको विरुद्ध लड्छु । कसैको दवाबले मलाई एक इञ्च पनि हल्लाउन सक्दैन । यही चिज जनतालाई मन परेको हुन सक्छ । जनताकै यस्तै सकारात्मक प्रतिक्रियाले मलाई झनै प्रोत्साहन मिलेको छ । अझै अगाडि बढ्न उर्जा मिलेको छ । अपराधिहरु विरुद्ध लड्नको लागि प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।
धेरै चुनौति र समस्याहरु छन् । हुनु स्वभाविक पनि हो । देशमा विसम परिस्थितिहरु आए । सिमित स्रोत, साधन र अभावहरु बीचमा हामीले गर्नुपर्ने पेशागत काम कारवाहीमा कमी हुन दिएनौ । चुनौतिलाई सामना गरेरै जनसेवामा अहोरात्र खट्यौँ । जिम्मेवारीहरु कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्यौँ ।
राजनीतिक संरक्षणमा हुने गुण्डागर्दी धेरै नियन्त्रण भएको छ
अहिलेको प्रमुख चुनौति भनेको कसरी नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेनै हो । स्वाभिमानका साथ काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु हो । नागरिकले कसरी सुरक्षा महसुस गर्छन् ? यसमा के के अठ्ठेरा बाधाहरु बाधा र अबरोधहरु छन् ? हाम्रो तर्फबाट के गरेमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विषयमा हामी असाध्यै गम्भिर भएका छौँ । नागरिकको जीवन कसरी सहज हुन्छ यसमा पनि हामी सचेत छौँ । शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरुले हामीलाई गम्भिर जिम्मेवारी बोध गराउँछ । गुण्डागर्दि र नचाईँदो क्रियाकलाप गर्ने अपराधिहरुलाई जुनसुकै हालतमा हतोत्साहित गर्न तयार छौँ । जसको लागि जुन सुकै कठोर कदम पनि चालेको छ नेपाल प्रहरीले । लाग्छ हामी सबैको चाहना हो अपराधिक क्रियाकलप नमौलाओस् । यहाँ केटाकेटीहरुले पढ्न पाउने वातावरण होस् । पेशा, व्यवसाय, उद्योग धन्दा राम्रो चलोस् राज्यका सम्पूर्ण काम निर्भय पूर्वक सम्पन्न होस् ।
नागरिकको ज्यूधन नेपाल प्रहरीको दायित्व
राजनैतिक दल र नेताहरुको दवाव सुन्दिन
आफ्ना नजिक भएका मान्छेहरु राम्रौ हुन्छन् भन्ने सोच नेपालका नेताहरुको पनि ठूलो कमजोरी हो । कसले के नराम्रा कर्तुतहरु गरेको छ भन्ने कुरा हामी प्रहरीलाई थाहा हुन्छ । उहाँहरुकोमा पेश हुँदा राम्रोसँग पेश भयो र मनि, मसलद्धारा आकर्षण गर्यो भन्दैमा त्यो व्यक्ति योग्य देख्नु उहाँहरुको दोषि चस्मा हो । हामीले कुनै पनि कुरामा विभेद नराखि अपराधिका कर्तुत हरुको आधारमासजाए दिन्छौँ ।
राजनीतिक रुपमा संरक्षण हुन्छ भनेर नेतागिरी गरेको फोटो खिचाएर हिड्नेहरु धेरैलाई हामीले समाति सकेका छौँ र कानुनको दायरामा ल्याई सकेका छौ । कुनै नेताहरुको नजिक भन्दैमा फटाहाहरुलाईछोड्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सभासद् बनाईदिन्छु भन्ने देखि लिएर ठूला ठूला ढगहरुलाई थुनिसकेका छौ । त्यसकारण हामी कसैको दवाव सुन्नेवाला छैनौ ।
कसैले सोधे निर्धक्क भन्न सक्छु यो बदमास मान्छे हो । त्यसकारण कारवाहीको भागिदार हुनै पर्छ । त्यति भन्दा पनि कारबाही नगर्न दबाब आउछ भने मान्नै पर्छ भन्ने छैन । सबै कुरा नियम कानुनले बोल्छ मैले बोलिरहनै पर्दैन । मलाई यति मात्र थाहा छ म कुनै पनि हालतमा दवाब, प्रभावमा पर्दिन । मुलकमा राम्रो खालको समाज बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । नेताहरुको पनि दायित्व हो । आम नेपालीको दायित्व हो । राज्यको नियम कानुन लागु गर्नु र त्यसै अनुकुल समाजलाई चलाउनु हाम्रो पनि हामी सबैको कर्तव्य हो । कानुन भनेको सबैको लागि बराबर हुन्छ । सबैलाई समान रुपले लागु हुनुपर्छ चाहे त्यो ठूलो होस वा सानो ।
राजनैतिक दवाव धेरै आउने गरेको छ त्यो स्वभाभिक हो
राजनैतिक दवाव मलाई पनि नआएको होइन धेरै पटक आए । आउनु कुरा ठूलो कुरा होइन मैले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छु । हामीले नेपालको संविधानको कानुनमा जे छ त्यो लागु गर्ने हो । त्यही पनि मन्त्रालय अनुकुलको कानुन । के गर्ने के नगुर्ने भन्ने कुरा मौखिक रुपमा कोही व्यक्तिले भन्दैमा त्यो नियम कानुन बन्न सक्दैन । त्यस कारण कुनै पनि मान्छेले मेरो यो वा ऊ हो भनेको कुरा आदेश हुन्छ । कोही अमुक व्यक्तिको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नै पर्छ भन्ने कुनै कर छैन । कानुन विपरित सबैको कुरालाई लत्याईन्छ । चाहे त्यो ठुलै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वनै किन नहोस् । दवाव दिनु उपयुक्त होइन । समय मात्र बर्बाद हुन्छ । काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन । प्रोत्साहन हुनुपर्छ । कामगर्ने वातावरण सबैलाई हुनुपर्छ ।
अपराधीहरु समाजका दुश्मन हुन्
चोर, डाँका, लुटेरा, तस्करहरु भनेका सबैका दुश्मन हुन् । यीनिहरुले सबैलाई असर गर्छन् । यी कसैका पनि मान्छे हुन सक्दैनन् । ती आफ्ना अनुकुलताका मान्छेको पावर आउँदा केही शक्तिशाली जस्ता देखिए पनि त्यस्ता झुण्डलाई ठिक लगाउन प्रहरी प्रशासनले राम्रोसँग जानेको छ । सबैलाई कानुन कानुन अनुकुल बराबर दृष्टीले हेर्नु हाम्रो दायित्व हो । कोही व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भने जो कोही होस हाम्रो नजरमा उस्तै हो । यसलाई छोडिन्न । दावाव आउँन त आउँछ । जागिरनै सरुवा गरिदिन्छु भन्ने सम्म पनि आउँछ । तर आफ्नो जागिरको डरले अपराध गर्ने उम्किन सक्दैन । त्यो जहाँ भए पनि यही आउने हो । राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सबैले राम्रै दृष्टीले हेर्छन भन्ने छैन । यो डरले देशको कानुनको कुरा छाड्ने भन्ने होइन । आफ्नो कतव्य कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्ने हो ।
सानै देखि समाजका लागि योगदान गर्ने सोच थियो
स्कुल कलेज पढेदेखिनै समाजलाई केही योगदान गरौ भन्ने लाग्थ्यो । म सफल होकी होइन यो त म आफैले भन्ने कुरा होइन यहाँहरुले मुल्यांकन गर्ने हो । जे होस् पहिल्यै देखि समाजलाई केही योगदान गरौँ भन्ने थियो । समाजमा नराम्रा मान्छेहरु हिजो पनि थिए आज पनि छन् सायद भोली पनि रहन्छन् । हिजो भएका नराम्रा गुण्डाहरुले गरेको नचाईदो कुराहरु पाच्य लाग्दैन थियो । राम्रा कुराहरुमा सधै समर्थन गर्न मन लाग्थ्यो ।संघर्ष गर्दै जाँदा यहाँ आईपुगेको हुँ । अहिले त झन् प्रहरीको महत्वपूर्ण पोष्टमा बसिसकेपछि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य निस्फ्रिक्रि रुपमा गरिराखेको छु । त्यस कारण समाजलाई जुन किसिमको योगदान दिनु पर्ने हो दिएको छु जस्तो लाग्छ ।